Home » About us » Newsletters » Karazana fandrindrana ➤ hita ao amin'ny Fivoriana Eran-tany Martsa
Fivoriana iraisam-pirenena momba ny fandrindrana ny Mondial II ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa
Hevitra ato Anatiny afeno
1 Espaina: Madrid-Sevilla-Málaga-Cádiz
1.1.1 Ny 28 na ny 29 amin'ny Septambra: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
1.1.2 Fandraisam-peo amin'ny fandraisana ny Diaben'ny Plaza Majior na Plaza España na Cibeles
1.1.3 From 1 to October 20 (20 days)
1.1.4 Asa hafa efa nomanina
1.2 A Coruña
1.2.1 2018. Fampisehoana ny Diabe Maneran-tany amin'ny As. Fikambanan'i Feán, C. Bibliotheque Civic de Monte Alto, Tranombokin'ny Castrillón, As.
1.2.2 2019. Fampisehoana ny Diabe Eran-tany ao amin'ny Center Mall Civic Os Mallos
1.2.3 Hetsika atao amin'ny kalandrie ho avy
2 Afrika: firenena 17 - tanàna 24
2.2 Espaina: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura.
2.2.1 Oktobra-2019: Fomba fiaina manerana izao tontolo izao amin'ny alan'i Canary.
2.7 Benin sy Togo
2.9 Repoblika Demokratikan'i Congo
2.10 Firenena hafa any Afrika
2.10.1 Ny vaovao dia alefa any amin'ireto firenena manaraka ireto
3 Amerika: firenena 22 - tanàna 85
3.1.1 Nisy fanasana natao tamin'ny karazana fandrindrana nalefa tany amin'ny ankamaroan'ny vondrona mpirotsaka an-tsitrapo tao an-tanàna.
3.2.1 Firenena Mikambana
3.4.1 Manana sehatra samihafa izahay
3.4.2 Famerenana ny karazana fandrindrana ny làlan'ny ekipa mpanohana
3.4.3 Hetsika hampiharina taorian'ny hetsika fifidianana
3.8.1 Fanambarana ny tombontsoa ara-kolotsainan'ny governemanta tamin'ny Martsa Faharoa
3.10.1 Barrancabermeja (E. Mpanohana an'i Anthony sy Melba)
3.10.2 Medellín (E. Mpanentana Elex sy Gloria)
3.10.3 Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (tanàna 10)
3.10.4 ny hafa
3.11.1 Guayaquil miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny karazana fandrindrana
3.11.2 Mitoloko miaraka amin'ireo hetsika ireo
3.12.1 Hafatra avy any Venezuela
3.14.1 Hetsika any amin'ny firenena
3.14.2 Mpandresy ao an-toerana
3.14.3 Tetik'asa fanohanana
3.14.4 Central Acts
3.14.5 Fomba mandresy
3.14.6 Other Events
3.14.7 Hetsika ara-tsosialy sy fikambanana izay miara-miasa sy manohana
3.14.9 Media sy Diffusion
3.14.10 Social Networks
3.14.11 Zava-miafin'ny tsy fahasalamana sy ny fandriampahalemana amin'ny mizana samihafa
3.14.12 Manavotra ny anjara biriky amin'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fananana herisetra ara-dalàna any amin'ny firenena
3.14.13 Omeo ny fahitana ny fifandonana sy ny traikefan'ny tombontsoa manokana ho an'ny firenena
3.14.14 Hevitra matanjaka sy lohahevitra tokony hiorina ao amin'ny firenena araka ny maha-izy azy ireo
3.14.15 Toe-karena sy ny famatsian-tena
3.15.1 Mifandraisa amin'ireo andrim-panjakana
3.18.1 Hisy hetsika roa lehibe eto amin'ny firenena
4 Ranomasimbe-Australia-Azia: firenena 7 - tanàna 17
4.5 Korea Atsimo
4.6 Sarin'ny Koreana roa
4.9.1 Mikasa ny hanao ireo hetsika ireo any Nepal isika
4.9.2 Ny asan'ny ekipa mpanohana ny Diaben'ny Faharoa maneran-tany any Nepal
4.9.3 Ny ekipan'ny Base dia hifindra any amin'ny tanàna hafa raha azo atao.
4.9.4 Tsara raha toa i Sudhir sy Nailesh mandray anjara amin'ny ekipan'ny Base ao Nepal
4.10.1 Ny fangatahantsika
4.10.2 Mumbai - India
4.10.3 Ny toetoetran'ny fiaraha-miasa amin'ny karazana fandrindrana dia tokony hofaritana amin'ny antsipiriany.
5 Eoropa: firenena 29 - tanàna 57
5.1 Tendrontany Avaratra
5.8.1 Toerana avaratra-andrefana
5.8.2 Avaratra Avaratra
5.8.3 Fomba hafa mampiova hevitra
5.8.4 Base Team
5.8.5 Mediterane, Ranomasina Fiadanana
5.10 Mediterane: Ranomasina fandriampahalemana.
5.11 Vatican City
5.11.1 Resadresaka nifanaovana tamin'ny ady sy ny herisetra
5.11.2 Amin'ny faran'ny volana Aogositra amin'ny 2019, miaraka amin'ny vondrona hafa sy ny mpamoaka
5.11.3 Nandefa taratasy taratasy ho an'ny Sekreteram-panjakana izahay mba hanondroana ireo karazana soso-kevitra momba ny fandrindrana
5.12 Firenena hafa any Eoropa
6 Fitaovana hanamora ny karazana fandrindrana sy ny olana hafa
6.1.1 Ny lisitry ny fiteny
6.1.2 Vita ny dingana mitam-piadiana ao amin'ny tranonkala. Rehefa tapitra ity dingana ity dia ho ampiharina amin'ny lohahevitry ny RRSS.
6.3 Fivoriana virtoaly manaraka hifanakalozan-kevitra momba ireo karazana fandrindrana manerantany
El FITSARANA NY MARINA 2ª ny 23 na ny 24 amin'ny Septambra dia hatao ao Madrid.
Ny efitrano ho an'ny haino aman-jery dia mety ho an'ny trano biriky Cibeles na ny an'ny Bakery House. Duration of 12 to 14 (2h).
Fanamafisana ny finday ho an'ny fitsidihana bisikilety iray ho fanohanana ny March 2ª tamin'ny 28 tamin'ny Septambra.
(EBA). Mandao ny 28 / 9 mankany amin'ny 11 avy ao Legazpi ary mandehana amin'ny distrikan'i Arganzuela, toy ny efa nataony tamin'ny taona hafa.
Ny 28 na ny 29 amin'ny Septambra: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
Andro ara-mozika / kolontsaina / gastronomy miaraka amin'ireo vondrona avy amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao (misy vondrona Afrikana sy Atsimo).
Mandritra ny 2 sy ny 8 amin'ny volana Oktobra: ny kolontsaina ara-tsosialy Espaina. Fanentanana iraisam-pirenena any amin'ny tanàna lehibe misy karazana fandrindrana iraisam-pirenena
2 ho an'ny Oktobra: Fahazoan-dàlana hivezivezy any an-tanàn-dehibe, manomboka amin'ny 16: 00h:
Plaza España - Calle Bailen - Calle Mayor - Mayor Ben'ny tanàna 1,4 km.
Puerta de Alcalá - Cibeles - Seville - Sol - Calle Mayor - Plaza Mayor 1,8 km.
Fandraisam-peo amin'ny fandraisana ny Diaben'ny Plaza Majior na Plaza España na Cibeles
18: 30 Fanaraha-maso Martsa an'ny mpifanolo-bodirindrina. Mila dingana iray isika hanaovana hetsika sy fampisehoana.
19: 30 Ny mari-pamantarana ny fiadanana sy ny tsy fisian'ny asa. Toerana malalaka eny an-kianja.
20: 30 Fampisehoana ny mpitendry mozika sy ny fampisehoana dian-tongotra kely. Mety ho anarana ny fampisehoana mba ny tarehy: nofo sy taolana, manaikitra, Leonor Watling, Rozalén, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Langui, macaco.
From 1 to October 20 (20 days)
Fivarotana fampisehoana hanolotra ireto votoana manaraka ireto:
Sarin-tsary sy horonan-tsary momba ny "World March".
Lahatsary sy sarin'ireo "Sarin'ny zanak'olombelona any amin'ny Sekolin'i Madrid".
Panels an'ny "Referenz de tsy herisetra" Gandhi, ML King, Silo ...
Fampirantiana ny Vehivavy manana diamondra roa: "ratra", "tadiava amin'ny fomba hafa".
Asa hafa efa nomanina
Fanombohana ny lalao OCA
App ny Diaben'ny Mondialy 2ª
Sampan-draharaham-panabeazana ho an'ny sekoly fanaraha-mason'ny Diaben'ny Andro Erantany 2ª
Toerana mety hametrahana sarivongana na takelaka fahatsiarovana ny fialan-tsasatra tamin'ny II Martsa.
Manolotra ny habak'i El Matadero izahay. Mandritra ny lalantsara fidirana, any ambadiky ny varavaran'ilay Plaza de Legazpi.
Raha tsy mety, dia ao amin'ny kianjan'ny Skating Rink Madrid Río.
2018. Fampisehoana ny Diabe Maneran-tany amin'ny As. Fikambanan'i Feán, C. Bibliotheque Civic de Monte Alto, Tranombokin'ny Castrillón, As.
Ny mari-pamantarana iraisam-pirenena momba ny fandriampahalemana ao amin'ilay hetsika fanangonana fandriampahalemana sy ny zo hialana.
Fizarana brochures of World no tsy misy ady amin'ny Diabe Eran-tany.
Fandikana ny fanadihadiana "Tupac Amaru, miovaova zavatra" ao amin'ny Bibli. Castrillón.
Dokam-barotra "Samba, anarana mahavariana" ao amin'ny As. Vecinal Agra.
Resaka - kolokoly momba ny fitaovam-piadiana niokleary ao amin'ny Tranombokin'i Castrillón.
Fampisehoana ny Filankevitry ny Permanent Advocacy momba ny herisetra amin'ny fiarahamonim-pirenena Agra. Nataon'i Ricardo Lucero
2019. Fampisehoana ny Diabe Eran-tany ao amin'ny Center Mall Civic Os Mallos
Colegio Fernández Latorre (mpianatra sy mpiara-monina 600), resaka - colloquium "Fialana amin'ny herisetra, filàna manokana sy filàna ara-tsosialy" nataon'i Philippe Moal.
Atrikasa momba ny tsy fampiasana herisetra ao amin'ny forum Propolis association.
Ny mari-pamantarana iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana amin'ny famakiana ny "Ethical Commitment Plaza de María Pita" (mpianatra 300).
Fankasitrahana ny volavolan-dalàna mifehy ny Motion hanamarinana ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fiadiana niokleary.
Atrikasa momba ny tsy fampiasana zaza tsy ampy taona ao amin'ny forum Propolis association.
Fanambarana an-tsoratry ny Filan-kevitry ny tanànan'i Coruña manaraka ny Diabe 2ª ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanaovana herisetra ary ny fanambarana ny 2 tamin'ny volana Oktobra ho andron'ny tsy fananana herisetra mihatra amin'ny A Coruña.
Fampisehoana ny Diabe Eran-tany ao amin'ny Sphera Academy.
Atrikasa momba ny tsy-herisetra ao amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena Agra.
Hetsika atao amin'ny kalandrie ho avy
26 Aprily 2019 Chainan'ny ankizy mpianatra ho amin'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fihinanam-be ao amin'ny lapa miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny foibe fanabeazana 8 sy mpianatra 3.500.
May 9: Fanolorana ny Diabe Maneran-tany ao amin'ny Fikambanan'ny Vondrom-bahoakan'i Ventorrillo.
6 of June: fivoriana goavana ho an'ny fikambanan'ny tanàna ao amin'ny Sagrada Familia Social Center.
21 mankany amin'ny 23 of June: Mitsangàna ao anaty tobim-pahasalamana ho an'ny fandriampahalemana sy ny zo hialana sasatra, miaraka amin'ny atrikasa momba ny tsy herisetra.
September 5: Fihetsiketsehana 2ª ho an'ny fikambanan'ny tanàna ao amin'ny Ciudad Vieja Civic Center.
October 2: Ny mari-pamantarana ny fiadanana ao amin'ny Plaza de María Pita ary fifandraisana mivantana amin'ny fanombohana an'i Madrid amin'ny Diabe 2ª ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona
Ny tolo-kevitr'ireo mariky ny fandriam-pahalemana an'ohatra ao amin'ny foibe fanabeazana ao an-tanànan'i Máis de 3.500 avy ao A Coruña dia mamorona firaisana ara-nofo iray mba hitakiana ny fandriampahalemana sy ny fampihorohoroana ny herisetra.
Haba ho an'ny hetra: Hetsika fanehoan-kevitra sy fanamelohana.
Afrika: firenena 17 - tanàna 24
Nandritra ny fitsidihan'i Martine tamin'ny faritra atsinanan'i Maraoka sy tamin'ny alalan'ny fikarakarana fisaorana an'i Miloud sy Azzedine.
Ny fifandraisana dia napetraka miaraka amin'ireo vondrona marobe ao anatin'io karazana karazana fandrindrana iraisam-pirenena io, izay tokony hitarika amin'ny tolo-kevitra momba ny asa aman-draharaha (jereo ny tatitra voaray ao amin'ny lisitra).
Herinandro vitsivitsy dia ho any Maraoka ihany koa.
Espaina: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura.
Oktobra-2019: Fomba fiaina manerana izao tontolo izao amin'ny alan'i Canary.
Manararaotra ny andalan-tsarin'ny Martsa Manerantany maneran-tany isika, dia hampiroborobo ny mety ho lasa Forum'ny Canary 1 momba ny fandriam-pahalemana.
Midika izany ny fampidirana foibe fanabeazana maro ary ny fiantohana ny fitohizan'izy ireo.
Ny tombontsoa dia hoe, amin'ny ho avy, dia ho toerana fivoriana ho an'ireo rehetra liana amin'ny fandrosoana ny karazana herisetra rehetra avy amin'ny fanabeazana.
Ny fivoriana virtuelle 3 dia nandray anjara.
Miatrika famaritana hetsika henjana izy ireo.
Ao Dakar, Keba DIOP dia nifandray tamin'ireo sekoly telo ary mikasa ny hitondra azy ireo mandritra ny andro tsy misy herisetra izay ahafahan'izy ireo mamorona olombelona marika.
Ny diffusion dia natao tany amin'ny sekoly tsy miankina hafa izay ahafahana manomana ny fampisehoana.
Manadihady koa ny mety hisian'ny fampisehoana sy ny mariky ny fiarovana ny olombelona.
Mpandray anjara hafa: Ndiaga DIALLO Association Diretti humani, Cheikh DIOP, Samba X Théâtre sensibilisation, Papis BADJI.
Nanomboka nanaparitaka ny tetikasa tamin'ireo tanora mpianatra i Martine.
Nandray anjara tamin'ny chat izy ireo. Famaritana ny fialantsasatra eo amin'ny karazana fandrindrana. Mamut Jange
Benin sy Togo
Nisy ny fanendrena ny fanombohana ny Diaben'ny Andro Faharoa.
Ity asa manan-danja ity dia namela antsika hanana fahitana mazava momba ireo tanjona napetraktsika ho an'ny tenantsika:
Mikarakara fifaninanana sokajy baolina kitra antsoina hoe "PEACE FOR A BETTER FUTURE".
Izany dia ahafahan'ireo ekipan'i Bénin sy Togo hifaninana mandritra ny roa volana amin'ny fifandimbiasana roa amin'ireo firenena roa ary hanaitra ny fitsipiky ny hetsika tsy misy herisetra.
Mianara sekoly ampy ary mandamina lalao. Hanomana ny dingana hahazoana olona marobe isika.
Amboary ny fampitam-baovao mba hanokanana toerana ho fampielezana tsy misy herisetra sy ireo hetsika tsy maintsy atao mba hambolena ny fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao.
Farazo amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny mpanakanto nasaina sy ny fanatontosana ny filaminana fandriampahalemana izay ho ivon-toerana ho antsika.
Fanamarihana: Tianay ny fandrindrana manerantany ny Diabe Maneran-tany maneran-tany mba hanamorana ny asantsika eny an-kianja manampy antsika hanana:
Ireo antontan-taratasy ofisialy izay afaka asehontsika raha ilaina izany mba tsy hanakorontana ny fomba fiasantsika amin'ny fikorontanan'ny filaminam-bahoaka, satria ny firenena rehetra dia mihenjana ary manameloka ny zava-drehetra ny manampahefana.
Alefaso any amin'ny fanjakana tsirairay ny taratasy hanazavana ny tetikasa.
Mitadiava fitaovana ilaina hanatanterahana ity dia ity.
Faly be izahay nandray ity tetikasa mendri-kaja ity izay tiantsika hahombiazana.
Tianay koa ny delegasiona iraisam-pirenena hitsidika an'i Benin sy Togo.
Miandry fanamafisana izahay mba hanambara ny alimanakan'ny hetsika samihafa nanapa-kevitra tao anatin'ity fandrindrana iraisam-pirenena ity.
Ny tanjona dia milaza fa efa nifandray tamin'ny tanora Afrikana Nasionaly sy ireo fikambanana hafa ny fifandraisana amin'ny fiomanana manomana hetsika any Abuja.
Mangataka karazana tahirin-kevitra ofisialy momba ny karazana fandrindrana iraisam-pirenena izy mba hanamorana ny fifandraisana amin'ireo manampahefana.
Repoblika Demokratikan'i Congo
Nandray anjara tamin'ny chat izy ary nandefa ireto fanamarihana momba ny Kongo DRC ireto:
Any Congo, tsy misy ny tena fiadanana na ady marina. Izany no fototra iorenan'ny olona te hanangana ady.
Izany koa no antony tsara ho antsika izay te hanorina fiadanana.
Raha mikasika ny Martsa Mondial 2ª, ireo olona izay mampanantena fa tsy hanampy ny fampanantenany.
Na izany aza dia matokia fa ny angon-drakitra (voasoratra + sary) dia halefa tsy tapaka ao amin'ny tanàna kelin'i Lubumbashi.
Manantena izahay fa ny tanàna Kongoley hafa dia afaka hiaraka aminay.
Firenena hafa any Afrika
Ny vaovao dia alefa any amin'ireto firenena manaraka ireto
Tonizia sy Ghana
Mozambika: Nalefa tamin'izy ireo ny vaovao. Remigio CHIALAUE mifandray
Kenya: Nandray anjara tamin'ny chat izy ireo. Izy ireo dia nandefa vaovao: Ben Oko
Amerika: firenena 22 - tanàna 85
Hisy fihaonan'ny ekipa ekipa amin'ny ambaratonga amerikana Latina ao amin'ny Martsa manerantany ao anatin'ireo karazana fiaraha-miasa atolotra eto.
Mpanaitra mpanohana: Pablo Acevedo sy Gabriel Vergara.
Tamin'ny Avrily 2018 dia nandray anjara tamin'ny Martsa Mondial Faharoa amin'ny hetsika Spring of Alternatives.
Tao dia nanangona angona 40 liana (40) izahay.
Nandefa mailaka imailaka maromaro izahay ary olona iray nangataka fanazavana bebe kokoa ary nampiroborobo ny lalao sosialy antsoina hoe CONSENSUS momba ny famahana ny olana.
Nandefa fanasana izahay ho an'ireo vondrona mpilalao teatra ao an-tanàna ary nanaiky ny handray anjara ny teatin'ny Periscope.
Nisy fanasana natao tamin'ny karazana fandrindrana nalefa tany amin'ny ankamaroan'ny vondrona mpirotsaka an-tsitrapo tao an-tanàna.
Nandefa mailaka izy ireo ho an'ireo fikambanana marobe avy amin'ny mpianatra any an-tsekoly mba hangataka azy ireo hampita amin'ny haino aman-jery ny fanasana hananganana hetsika ho an'ny diabe.
Nandray anjara tamin'ny diabe ho an'ny Andron'ny Tany izy ireo miaraka amin'ny hafatra fa ny tsy fisian'ny herisetra dia ekolojika: tsy misy ady akory tsy misy fitaovam-piadiana.
Nizara fanodidinana teo amin'ireo mpandray anjara sasany izy ireo.
Ny famoahana gazety dia nokarakaraina mba hangatahana sehatra ary hanasa ny hikarakara hetsika mandritra ny diabe.
Amin'ny asabotsy, 27 / 4 dia hanatrika indray ny hetsika Primavera de los Alternativas hikaroka fifandraisana.
N.York, Los Angeles. Nalefa ny vaovao
Fankalazana an'i M. Luther King Washington. Hélène Park.
Fandraisana ny Jeneraly Jeneralin'ny Firenena Mikambana ao N. York.
Hetsika amin'ny "Fampandresen'ny Firenena Mikambana".
Hetsika any amin'ny sisintanin'i Etazonia Nandray anjara tamin'ny sehatra maro ny Angels Border.
Fankalazana ny fifanekena tamin'i Tlatelolco.
City, Antigua, Esquipulas. Mixco,
EP Alberto Vásquez Coordination.
Raha jerena ny fifidianana ankapobeny any Guatemala amin'ny volana Jona.
Ny hetsika sasany dia nifantoka tamin'ny fiomanana.
Misy fifandirana eo amin'ireo sampan-draharaham-panjakana, toy ny Fitsarana Tampony sy Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana ary ny Sampan-draharaham-pitsarana momba ny fisoratana anarana ho an'ny kandidà mifandraika amin'ny vondrona mpiharo rongony.
Izany rehetra izany dia tsy manampy amin'ny fihetsika maivana amin'ny fanomanana ny Diaben'ny Fandriampahalemana ho an'ny Fandriampahalemana sy ny tsy herisetra ao amin'ny firenena.
Fanamafisana ny ekipa mpanohana ny Martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa.
Ny fifamatorana eo amin'ny olona sy ny fikambanana dia nasongadina tamin'ny karazana fandrindrana mba hanamafisana orina ny vondrona mpanohana.
Manana sehatra samihafa izahay
Fikambanana Sivily, DiverArte, Fikambanana mifandraika amin'ny Fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina.
Ankoatra izay, ny fikambanan'ny mpianatra, ary ao amin'ny Oniversite Nasionaly, Estudiantina ao amin'ny Oniversiten'i San Carlos ao Guatemala, ny tanàna dia sahala amin'ny tanànan'i Mixco.
Famerenana ny karazana fandrindrana ny làlan'ny ekipa mpanohana
Tsidiho ny Sampan-draharahan'ny Quetzaltenango (200 km avy amin'ny renivohitra) hanova ny fifandraisana amin'ny fiantohana ny lalan'ny ekipan'ny Base ao amin'io tanàna io.
Ao amin'ny tanàna misy an'i Chiquimula, dia tafaverina ny fifandraisana mba hivezivezy ny fihetsiketsehana, haka indray, ohatra ny Monument pour la Marche Mondiale, naorina teo am-baravarana tao amin'ny tanàna.
Toerana izay hizarana ny ekipa fototra ho any Santa Rosa de Copan Honduras sy La Paz, any Salvadaoro.
Hetsika hampiharina taorian'ny hetsika fifidianana
Hetsika any amin'ny foibe fanabeazana, Symbols of Peace.
Forums, fanadihadiana ary fifanakalozan-kevitra.
Fihaonana an-dalambe natsangan'ny DiverArte.
Famoronana sy famerenana ny antontan-taratasy.
Famantarana ny fisantaran'andraikitra nomen'ny Mpitantana an'i Guatemala ho fanamarinana ny fifanarahana momba ny fandraràna ny fiadiana fiadiana nokleary.
Fampiofanana ny sekoly 60 izay hitarika ny fananganana ny mariky ny fandriampahalemana, miaraka amin'ireo ankizy avy amin'ny sekoly any amin'ny sisintanin'i Honduras sy Guatemala, rehefa mahazo ny March 2ª.
Ny fikambanan'ny mpitsabo mpitsabo ao amin'ny oniversite nasionalin'ny UNAH sy ny oniversite tsy miankina dia mandamina ny fanarahan'ny Martsa Mondial 2, amin'ny fitsidihany an'i Amerika Afovoany.
Ny vondrom-bahoakan'i Omoa sy San Pedro Sula, dia manapa-kevitra ny handray anjara amin'ny Diaben'ny Mondialy 2ª, miaraka amin'ny fanentanana goavana ny vahoaka.
Mitarika lahateny am-bava telo ao amin'ny oniversiten'i San Pedro Sula momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny fandriampahalemana manerantany.
Leon, Managua. Nahazo fampahalalana izy ireo.
San José, San Pedro de Montes de Oca, Liberia ary Heredia.
Fikambanana miasa ao amin'ny Foiben'ny Fampandrosoana Central: Ny fanovana ao amin'ny Foundation Violence Times, namana ho an'ny fandriampahalemana.
Ary ampiana izy ireo, ny Unit Prevention Violence ao amin'ny Campaign Municipal Police PAIN-V ao amin'ny Sekoly sy ny Colleges 11 (Hatreto).
Atrikasa ho an'ireo mpampianatra sy mpianatra.
Hetsika ara-javakanto sy ny marika ataon'ny olombelona amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Fandriam-pahalemana 21 / 9.
Fankalazana ny andron'ny 2 / 10 amin'ny tsy fanaovana herisetra sy ny fialàn'ny Martsa Manerantany.
Fanambarana ny tombontsoa ara-kolotsainan'ny governemanta tamin'ny Martsa Faharoa
Fihetsiketsehana mandritra ny andalan-tsoratry ny Diabe Maneran-tany.
Forum iraisam-pirenena momba ny "The Role tafika tamin'ny taonjato XXI". (Miandry ny fankatoavan'ny governemanta).
Hetsika miaraka amin'ny ankizy 1000 ao amin'ny esplanade an'ny Children's Museum. (Amin'ny fikolokoloana).
Concert ho an'ny fandriampahalemana ao amin'ny Parque de la Democracia. (Amin'ny fikolokoloana).
Sariohatry ny olombelona miaraka amin'ny mpianatra, any amin'ny toeram-pampianarana sy toeram-pampianarana samihafa any amin'ny tanàna sasany. (Amin'ny fikolokoloana).
Fandraisana anjara amin'ny fandaharana maro sy fanadihadiana ataon'ny gazety, Radio ary TV. (Amin'ny fikolokoloana).
Fanamafisana ny EPP ary fivoriana isaky ny omaly amin'ny alarobia ao amin'ny CAP avy amin'ny 5p.m.
Ao Panama, Mondialy tsy misy ady ary tsy misy ny herisetra Belkis de Gracia izay nitarika ny sehatra iray tao amin'ny University of Interamerican Panama.
Eo anelanelan'ny faran'ny Septambra sy ny fiandohan'ny Oktobra amin'ity taona ity dia hanao forum ao amin'ny oniversite eo an-toerana isika (toerana, daty sy fotoana hanamafisana).
Ireo mpihaino dia nasaina handray anjara amin'ny Forum: "Kolontsaina fandriampahalemana, tsy herisetra, fanajana ny zaza sy ny voajanahary ho an'ny Panama tsara kokoa", ao anatin'ny rafitry ny World World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra. Izy ireo dia afaka hizara amintsika ny vaovao momba ny fiaviana sy ny fampahalalana heveriny fa misy ifandraisany amin'ny zavatra natao tamin'ny maha-humanisme sy ny fandraisana anjara hafa momba ny karazana fandrindrana.
Tohizo ny asa miaraka amin'ireo sekoly 40 izay nanohana anay tamin'ny Diabe Amerikana Atsimo. Atrikasa momba ny herisetra tsy miangatra, sary mihetsika, sary manintona ny lohahevitra, fananganana sainam-pirenena, tantara sy asa soratana, famantarana ny fandriampahalemana ao amin'ny sehatra sy diabe.
Ny mariky ny fandriampahalemana dia hiorina ao amin'ny Plaza de Bolívar izay manasa olona 5000.
Famoronana fampisehoana lehibe ho an'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra.
Barrancabermeja (E. Mpanohana an'i Anthony sy Melba)
Fihaonan'ny Unipaz (Oniversite) sy ny SENA.
Diabe goavana manerana ny tanàna dia manangona olona 2000.
Hifandray amin'ny haino aman-jery ny fifandraisana izay niasan'izy ireo tamin'ny diabe voalohany ary nifarana miaraka amin'ny mariky ny fandriampahalemana.
Manasà mpikambana iray ao amin'ny Base Team handray anjara amin'ny B / ca amin'ny fihaonambe sy ny marika.
Ilaina ny hanamarinana daty.
Medellín (E. Mpandoka miandraikitra an'i Elex sy Gloria)
Karnavalin'ny kolontsaina: ny kaominina rehetra dia midina mankany Medellín ao amin'ny comparsas mankany amin'ny diabe mamakivaky ny tanàna.
Miresaka any amin'ny anjerimanontolo momba ny fandriampahalemana sy ny herisetra.
Mifandray amin'ireo orinasam-panjakana, tompon'andraikitra amin'ny Zon'olombelona sy mifandray.
Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Armenia-Neiva (tanàna 10)
Ao amin'izy ireo, ny diabe sy ny marika amin'ny fandriampahalemana dia hatao ao amin'ny tanàna tsirairay.
Mifandraisa amin'ny sekoly
Miresaka momba ny herisetra tsy miankina ao amin'ny oniversite sy institiota.
Ao Barrancabermeja, natao ny olona iray na roa amin'ny EB handray anjara amin'ny hetsika ao an-tanàna sy ao amin'ny Kianjan'i Kolibri.
Andrés Salazar sy Marly Arévalo dia te-hanolotra ny tenany ho anisan'ny EB izay nandao an'i Madrid-Espana.
Hanao T-shirt, sora-baventy, sora-baventy, taratasy ho an'ireo orinasa, oniversite ary oniversite izahay ary izay ilaina amin'ny fanaparitahana ny Diabe faharoa.
Misy ifandraisany amin'ireo orinasam-panjakana, zon'olombelona, ​​fototra ary andrim-panjakana izay mifanohitra amin'ny fanentanana ny fandriampahalemana sy ny herisetra tsy miangatra.
Mikasika ny mety hisian'ny ekipa mpanohana ny Diabe Eran-tany dia misy tanàna 2.
Guayaquil miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny karazana fandrindrana
Ireo oniversite: U. de Guayaquil sy U. Casa Grande.
Tompondakan'ny mpilalao fanatanjahan-tena tanora.
Sekoly sasantsasany sy ny tanànan'i Guayaquil.
Mitoloko miaraka amin'ireo hetsika ireo
Miaraka amin'ny tabilao Panamerika Panamerika.
Ekoatera Manta: Famantarana ny tanànan'i Manta-Ekoatera ho fanakanana ny toby miaramila.
Hafatra avy any Venezuela
Eto Venezoela, ny fifandraisana, na amin'ny finday sy amin'ny Internet, amin'ny ankapobeny, dia avy amin'ny asa fampihorohoron'ny fahatapahana, tena tsy azo ovaina.
"Izaho ohatra"Maneho hevitra ny mpanelanelana ataontsika,"Manana herinandro roa aho tsy misy fifandraisana an-tariby, na WhatsApp. Ary olona maro".
Na ahoana na ahoana, miandry isika, na dia tsy nanao be aza. Maro ny tabataba amin'ny resaka politika sy iraisam-pirenena.
Paramaribo. Nahazo fampahalalana izy ireo.
Recife, Minas, São Paulo, Cubatão ary Caucaia.
Ekipa mpanohana: Gunther A., ​​Marcos R., Jobana M., Régis M., Rosana B. ary Vinícius P., Rosana B. ary Fernando P.
Hetsika any amin'ny firenena
Nandinika izahay fa nisy fiantraikany goavana teo amin'ny haino aman-jery ny diabe voalohany, fampiroboroboana lehibe tany Bahia sy Pernambuco.
Mihoatra ny 3 arivo ireo olona no nifandray tamin'ny tranonkala sy tambajotra sosialy tamin'io fotoana io.
Maro amin'ireo fifandraisana ireo no naverina nanomboka tamin'ny diabe Amerikana tao 2018.
Ho an'ity diabe faharoa ity dia hametraka laharam-pahamehana ny asa miaraka amin'ny mariky ny fandriampahalemana any an-tsekoly sy ny hetsika ary ny sehatra fiadian-kevitra tsy misy herisetra.
Mpandresy ao an-toerana
Hatreto dia manana mpandresy ny mpandrindra ny World March 2ª any amin'ny tanàna 5.
Ny hetsika dia voamarina ao Recife, Minas, São Paulo, Cubatão ary Caucaia.
Mbola tsy voamarina ry zareo ao Rio.
Azo atao ihany koa ny hetsika ataon'ny Curitiba sy Rio Grande do Sul.
Manohana sy ny fanoloran-tena ny toerana ara-kolontsaina ao amin'ny Foibe any São Paulo, ny UMAPAZ (Universidade Meio Ambiente Livre manao y da Paz) sy ny fanabeazana sy ny sekretera ny Cotia Pernambuco ho an'ny fiaraha-mientana ao amin'ny kianja mitafo sy ny sekoly.
Fikambanana maro no mifandray, toy ny: Sekoly, Oniversite ary Sekretera misahana ny Fanabeazana.
Ny tanàna tsirairay dia hanana hetsika hafa afovoany.
Ny tsipiriany dia tokony hazava ao amin'ny tanàna tsirairay.
Ao San Paulo niresaka momba ny manao ny zava-nitranga tao amin'ny Foibe ara-kolontsaina sy Cubatão mariky ny fihavanana tamin'i 300 alumnos.La lalana foibe no Recife vinavinaina ho 03 07 andro Desambra, Sao Paulo 8 11 ny / dec., Paraisópolis / 12 14 ny Minas andro / dec., 15 ny 18 Caucaia / dic.Este dia fandaharam-potoana voalohany ezaka mila ahitsy, afaka manova ny tanàna, ny toerana, daty sy ny fotoana.
Mikasa ny hanao diabe ho an'ny mpianatra izay mifarana amin'ny sariohatry ny fandriampahalemana any an-tsekoly, toeram-piofanana na kianjan'ny baolina kitra.
Avy Oktobra 2 mandroso dia maro karazana ny fandrindrana ho maro ny fanatanjahan-tena, ara-tsosialy sy ara-pivavahana ny fikambanana talohan'ny manomboka manao asa ara ekipa farany, ary, raha azo atao, dia ahitana ny mifanojo lalana.
Tao São Paulo, nisy iraka sasany dia nanao ny sarin'ny fanaovana fampiratiana sy ny fihaonambe iray tany Umapaz.
Pressenza sy 4V drafitra hanao andiana lahatsary fohy sy ny fandaharana isan-kerinandro mba hampiely sy fandrosoana tatitra ny Convergence ny kolontsaina marcha.La mikasa ny hanao hetsika ara-kolotsaina tamin'ny vehivavy mpifindra monina, miaraka amin'ny mozika sy / na toaka anatrehan'ny ao amin'ny Martsa ny Inmigrantes.En Recife atrikasa sy fampiofanana antokony ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra dia ho Rede-bahoaka.
Fanohanana ara-panabeazana: Hatramin'izao dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny sekretera sekoly, sefom-pokontany sy oniversite.
Hetsika ara-tsosialy sy fikambanana izay miara-miasa sy manohana
Mifandray amin'ireo fikambanana sy hetsika izay nanohana ny March 1ª eto Brezila, toy ny Institut Pólis, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz ary ny maro hafa.
Ny sasany amin'izy ireo dia efa nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana tamin'ny Diabe Amerikana Atsimo natao tao 2018.
Mbola tsy nanam-potoana hamahana ireo olana ireo izahay, fa manana trano fialokalofana sy fitaovana lahatsary 4V afaka manararaotra ireo zava-mitranga, miaraka amin'ny fandefasana mivantana ny sasantsasany amin'izy ireo.
Media sy Diffusion
Manana ny lisitry ny haino aman-jery mba handefa mpanao gazety Releases, 6 na haino aman-jery fifandraisana 7 mpiara-miasa, nefa tsy mbola mamorona ny ekipa ny mpanoratra ho an'ny asa fanaovan-gazety navoaka sy mandefa azy ireo amin'ny sasany matetika.
Hanana ny fanoratan'i Pressenza ao amin'ny SP sy ny fianarana 4V isika satria manohana ny famoahana fitaovana amin'ny karazana fiaraha-miasa
Ilaina ny manamboatra ny tambajotra amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, tranonkala, telegrama, sns ...
Zava-miafin'ny tsy fahasalamana sy ny fandriampahalemana amin'ny mizana samihafa
Hatreto misy tanàna roa izay mikasa ny hanao izany: Cubatão e Cotia.
Mifandray amin'ireo sekoly hafa izahay ary mikasa ny hanao fanazavana amin'ny teny portiogey.
Manavotra ny anjara biriky amin'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fananana herisetra ara-dalàna any amin'ny firenena
Tamin'ny voalohany dia nifanakalo hevitra momba ny fanomezana avy amin'i Paulo Freire, Maria da Penha, Augusto Boal, Chico Mendes ary Marielle Franco.
Omeo ny fahitana ny fifandonana sy ny traikefan'ny tombontsoa manokana ho an'ny firenena
Amin'izao fotoana izao ao Brezila mahery dia mahery ireny ny resaka sy ny zava-mahadomelina ny herisetran'ny polisy ady, mba hanamarinana-tsehatra eo amin'ny fiaraha-monina mahantra sy ny famoretana ny hetsi-panoherana, fampidirana am-ponja faobe, decontrol ny mitondra fitaovam-piadiana, herisetra, ny fitomboan'ny halako teny, fihazonana na ny fanenjehana ara-politika sy ny mpikatroka mafàna fo mpanohitra ny governemanta sy ny famonoana ny mainty ny mponina ao an-periphery sy ny vazimba teratany any an-tsaha.
Hevitra matanjaka sy lohahevitra tokony hiorina ao amin'ny firenena araka ny maha-izy azy ireo
Ny fitiavana dia handresy ny fankahalana.
Toe-karena sy ny famatsian-tena
Mbola tsy afaka nampahafantatra ny teti-bola ho an'ny Diabe tany Brezila izahay, hanomboka izany amin'ny volana Mey.
Niresaka momba ny fanentanana avy amin'ny vahoaka izahay.
Olana, hetsika na fifandonana izay mety hivoatra na manana fiantraikany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na iraisam-pirenena: fiaraha-miasa amin'i Brezila amin'ny Isiraely, hividy fitaovam-piadiana.
Ary ny fandefasana ny toby miaramilan'i Alcantara ho an'i Etazonia.
Tumbes, Piura, Lambayeque (olona avy any Chachapoyas sy Yurimaguas), Trujillo, Huaraz, Lima (tanàna 15).
Ny ekipa fampiroboroboana ao Però dia tarihan'i Carlos Degregori, Luis Mora, Mariela Lerzundi ary Riccardo Marinai.
Ny làlan'ny EB no ho làlana amin'ny tanàna rehetra. Mety mila sokajina ho vondrona maromaro izany.
Mifandraisa amin'ireo andrim-panjakana
Kaominina (Magdalena, Surco, Miraflores), Minisitry ny Fampianarana Cañete (vondrona 300 sekoly), College ny psikology ao Peru, mpanohana herisetra Cities, Anjerimanontolo (Ricardo Palma: Casa de Cultura Korihuasi,-pirenena U. Toribio Rodriguez de Mendoza, U. César Vallejo) Sekolin'ny Tourism ao amin'ny National University of Tumbes, Piura Task Group, Regional Governemantan'i Lambayeque, Regional Office ny Fanabeazana any Arequipa, Zon'olombelona ny mpanabe dia Network Group Kolontsaina Yurimaguas.
fitaovana: Ao amin'ny fampandrosoana: polona, ​​sora-baventy, sora-baventy, loko, stickers, bokotra, flyers, taratasy kely.
naoty: Manana mpandrindra isaky ny tanàna izahay. Manolotra karazana fandrindrana isan-karazany isika mba hampiroboroboana ny asa atao isaky ny teboka. Manana toerana miavaka any Lima izahay, omen'ny University Ricardo Palma.
Ireo hetsika dia nifantoka tamin'ny fanontana sy ny famoahana taratasy fanasana ho any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy sekoly ambaratonga faharoa ao amin'ny faritr'i Sopocachi ao La Paz. Hatramin'ny volana jolay, toeram-piofanana dia hatao ho mpampianatra sy mpianatra avy amin'ny faritra iray ihany.
Tsy mbola misy ny antsipiriany momba ny zavatra vita.
Ny ivon-toeram-pianarana Silo dia nanomboka tamin'ny famoahana ny asan'ny Mondialy. Hanomboka hikarakara hetsika izy ireo amin'ny Jolay.
Ao amin'ny dingana voalohan'ny fikambanana, miaraka amin'ireo mpanohana ao amin'ny faritany 8: Salta, vao haingana tao CABA (Tanànan'ny Tanànan'i Bs. As.)
Fanaovana asa fanaovan-tsonia ao Parque Lezama, Faritanin'i Buenos Aires sy ao amin'ny CABA; Ny ambiny dia fitantanana fifandraisana ary fikarohana ny fidirana.
Hisy hetsika roa lehibe eto amin'ny firenena
Famantarana ny reny sy renibeny ao amin'ny Plaza de Mayo ho mpanelanelana amin'ny tolona tsy misy herisetra.
Mankalazà an'i Silo. Na eo amin'ny dingan'ny fandaminana
Manana ny faneriterena ny Ministeran'ny Fampianarana ao Córdoba izahay ary ny fanambarana mahaliana ny Kaomisionan'ny provansy dia alaina.
Hetsika kely iray kasaina hatao amin'ny fandefasana ny bokin'ny Diaben'ny Amerikanina Tatsimo, ho any Milagros Sala any Jujuy.
Nifandray tamin'ireo masoivohon'i Kiobà, Venezoeliana ary Bolivia tao Buenos Aires izahay ary nandray anjara tamin'ny hetsika firaisankina tamin'ny vahoaka Venezoeliana tao Cordoba.
Fihaonana - Fanekena ny reny sy renibeny tamin'ny volana Mey tany Arzantina.
Fanomezana ho an'i Mario R. Cobos - Silo noho ny fandraisany anjara amin'ny tsy herisetra.
P. de Vacas: 2 / 1 / 2020 Fankalazana ny tsingerintaona 10º an'ny Diabe 1ª.
Manomboka mivory izy ireo momba ny karazana fandrindrana.
Tiany ny fomba hitombo amin'ny olona vaovao izay tafiditra ao anatin'izany asa izany.
Mikasa ny hitsidika ny faritra rehetra ao Chili izy ireo mba hampiroboroboana ity olana ity hampiroboroboana ny vondron'olona.
Izy ireo dia hanohana amin'ny famokarana fitaovana isan-karazany izay mandrakotra ny karazana fikambanana sy hetsika.
Ny hevitra dia ny hampidirana ny olona ho afaka hanohy tsy tapaka ny Diabe Eran-tany amin'ny famoahana manaraka.
Shily ihany koa ny fanohanana hampitombo TPAN (fifanarahana Fandrarana ny fitaovam-piadiana nokleary) efa mandroso amin'ny parlemantera izao fanitarana ny kaominina.
Handray anjara amin'ny ekipa mpahay siansa izy ireo izay mamorona programa fikarohana.
Ranomasimbe-Australia-Azia: firenena 7 - tanàna 17
Ampifandraiso amin'ny fifandraisana amin'ny Diaben'ny mondion 1ª.
Ny fankatoavana an'i Nouvelle Zélande ho firenena nokleary tsy misy fiadiana.
Fankalazana ny Taona 10º an'ny Diaben'ny Andro Erantany 1ª.
Sydney: Manohy ny fandaminana ny fivoriana momba ny WM ao Sydney.
Manamarina ny mety amin'ny fanatanterahana fihetsiketsehana eo amoron-dranomasina amin'ny lalan'ny WM, toy ny IWM. Decler dia tompon'andraikitra amin'ny ekipa mpanohana.
Hifandray indray amin'ny fifandraisana amin'ny Diaben'ny Andro Erantany 1ª
Tokyo, Hiroshima, Nagasaki.
Nail dia nandeha tany Japon ary nampiditra fifandraisana sasantsasany tao amin'ny oniversite.
Izy ireo koa dia manatsara ny fifandraisana amin'ny Ben'ny tanàna ho an'ny fandriam-pahalemana, ICAN ary ny an'ny Martsa Mondial 1.
Hajao ireo niharam-boina tany Hiroshima sy Nagasaki any Japana.
Mila mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny March 1ª izao tontolo izao isika.
Sarin'ny Koreana roa
Tsy maintsy mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny Diaben'ny Andro Erantany 1ª isika.
Hetsika any amin'ny sisintanin'i Korea atsimo sy avaratra.
Hifandray aminao izy. Mahaliana ny nandehanan'ny Diaben'ny Andro Erantany 2ª manerana an'i Shina.
Misy fikasana hifandraisana amin'ireo nandray anjara tamin'ny Diaben'ny Mondialy 1ª
Tulsi Sigdel sy Kabir Ranjit dia miasa ho mpandrindra. Ho any Madrid ny 3 amin'ny 2 2019 amin'ny XNUMX Nepali.
Magaj Bd Panthi sy Sharada Prashad Dhital dia maniry ny hitondra an'i Madrid amin'ny làlana afrikana ho EB.
Miomana izy ireo eo anelanelan'ny Nepaley 5 sy 10 mba hivezivezy any Madrid amin'ny faran'ny Diabe Eran-tany amin'ny 8 / 3 / 2020.
Any Nepal isika dia handamina ny National Humanist Forum.
Miasa amin'ny Fandaharan'asa Martsa Faharoa ho an'ny sekoly, oniversite ary fikambanana handray anjara izahay.
Mahita valiny tena tsara isika izay miankina amin'ny karazana fandrindrana.
Mikasa ny hanao ireo hetsika ireo any Nepal isika
Fivoriana any amin'ny oniversite any Kathmandu, Banepa, Panauti, Biratnagar.
Hisy fifanakalozan-kevitra eo amin'ny sekoly ao Kathmandu sy Kavre.
Forum humanumista (eo anivon'ny fikambanana 50 izay nanapa-kevitra tamin'ny tombontsoanao).
Lazao mialoha ny volana 1 ny hetsika ekipa fototra ao Nepal.
Fanavaozam-baovao isan-karazany nandritra ny hetsika tamin'ny volana Martsa tamin'ny gazety National News miaraka amin'ny famoahana isaky ny andro 15.
Brochure ary Banner an'ny Diabe Eran-tany amin'ny teny Nepaley sy Anglisy.
Ny asan'ny ekipa mpanohana ny Diaben'ny Faharoa maneran-tany any Nepal
Andro 1 - Tonga ao Nepal ny ekipa Base. Ny fifanakalozan-kevitra tsy manam-pahalalana sy ny fitsaharana.
Andro faha-2 - martsa maneran-tany any Panauti, 9:00 ka hatramin'ny 11:00, antoandro, manomboka amin'ny 1:00 ka hatramin'ny 3:00 maraina ao amin'ny lapan'ny kaominin'i Banepa. (Miverina any Kathmandu)
Ny ekipan'ny Base dia hifindra any amin'ny tanàna hafa raha azo atao.
Manantena izahay fa hahavita diabe any Biratnagar sy ireo zava-tsoa hafa ao amin'ireo tanàna toa an'i Bhaktapur sy Kirtipur.
Andro faha-3 - martsa manerantany ao amin'ny Lapan'ny tanàna Kathamandu na amin'ny Kianja Nasionaly.
Manantena ry 500 amin'ny olona 700 avy amin'ny andrim-panjakana rehetra (sekoly, oniversite ary fikambanana).
Andro faha-4 - Fihaonambem-pirenena (manana fahazoana mivoaka ao Lumbini ianao miaraka amin'ny fanomezana avy amin'ny mpanao gazety).
Hianarantsika ny mety hisian'ny diabe any amin'ny tobin'i Base de Sagarmatha (Everest).
ary Andro 5 - Tohizo ny dia mankany N. Delhi-India.
Tsara raha toa i Sudhir sy Nailesh mandray anjara amin'ny ekipan'ny Base ao Nepal
Avy any Nepal koa izahay dia liana ny hiray hina amin'ny ekipan'ny Base ao India.
Vonona ny hanome trano sy sakafo ho an'ny mpikambana ao amin'ny Base Team izahay.
Tulsi Sigdel / Kabir Ranjit mpandrindra ny Nepal
Nanomboka ny hetsika izahay tamin'ny fananganana marika fandriampahalemana tao amin'ny sekolin'i Kannur niaraka tamin'ny mpianatra an-jatony, ary nandray anjara koa ireo mpampianatra tao amin'io sekoly io.
Nifindra niaraka tamin'ilay hira hoe "Ho resy isika ..." nohirain'ny antokon'ny mpianatra.
Izahay dia mandika ny teny ofisialy ho fiteny 'Malayalam'. Nanamboatra loko loko amin'ilay bokikely aho.
Ny zava-dehibe iray hafa dia ny ekipa mpanohana ao amin'ny distrikan'i Jannie. Ny fandraisana anjara dia tsara sy mahaliana.
Nandray anjara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena izy mikasika ny karazana fandrindrana.
Avelao amin'ny fiteny iraisam-pirenena ny fitenintsika "Malayalam".
Azonao atao ny mavesatra ny tranokala sy ny hetsika.
Hanatona sekoly sy oniversite izahay. Ireo mpikambana ao amin'ny NSS 15,000 dia hiaraka amin'ny 2WM (Orinasa nasain'i Gandhi sy olona avy amin'ny fikambanana ara-pinoana).
Ny fifandraisana dia natao avy any Mumbai miaraka amin'i Ekta Parishad.
Ekta Parishad. Avy amin'ny karazana fandrindrana iraisam-pirenen'ny Diaben'ny mondialy 2ª dia mifandray amin'ny Ekta Parishad sy ireo mpikarakara ny Diabe Jai Jagat.
Manana fifanarahana momba ny karazana fiaraha-miasa izahay. Hanohana ny Diabe ho an'ny Mondialy 2 amin'ny diany manerana an'i India izy ireo ary hanohana azy ireo any Eorôpa.
Ny toetoetran'ny fiaraha-miasa amin'ny karazana fandrindrana dia tokony hofaritana amin'ny antsipiriany.
Hetsika any New Delhi ny 30 / 1 / 2020: fitsingerenan'ny andro nahafatesan'i Gandhi.
Eoropa: firenena 29 - tanàna 57
Munich sy Berlin.
Tamin'ny volana febroary dia nanatrika ny «Friedenkonferenz» tany Munich izahay mba hanambara ny faha-2 martsa maneran-tany ary mikarakara hetsika malaza eto Munich isika amin'ny 23 mey hanandrana ampahafantarina indray ny Martsa faha-2.
Ny hevitra dia ny March March maneran-tany nifanandrify tamin'ny "Friedenskonferenz", ny 14 febroary.
Ny hetsika any Alemana dia mety ho eo anelanelan'ny 12 sy ny 14 amin'ny Febroary.
Mety ho tonga any Berlin ny 12, ary tohizo any Leipzig (?) Or Frankfurt (?) Ary ny 14 mankany Munich. Sandro, Monica sy Harald no miala ao Munich.
Mitady izay afaka miasa ao Berlin izy ireo.
Tianay ho fantatra raha hisy fifandraisana amin'ny WILPF na ICAN any Alemana.
Miezaka ny hamorona vondron'olona 20 sasany isika izay afaka manolotra sy manomana hetsika any Alemana.
Ampidiro ny lisitry ny fifandraisana 7 nangonina nandritra ny Peace Network:
Tsy maintsy manaisotra fifandraisana ianao.
Ny vaovao dia alefa amin'ny karazana fandrindrana.
Tsidiho ny Parlemanta Eoropeana.
Mankalaza ireo niharam-boina tao amin'ny fonjan'i Ypres.
Bordeaux, Lyon, Nice, Toulouse, Ivry sur Seine, Paris.
Ao Bordeaux, ny ivotoerana ACDN (Citizens Action for Nuclear Disarmament) dia liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa.
Taorian'ny fandraisan'i Rafa ny fivoriana Jai Jagat Europe, tao Lyon, nisy fifandraisana tsara napetraka tamin'ny MAN (Mouvement pour une Alternative Nonviolente).
Misy, ao Nice, ny fifandraisana misy eo amin'ny tarika maromaro mba handaminana ny fampisehoana.
Ao Ivry sur Seine, any Paris, dia misy fifandraisana eo amin'ny tanàna.
Ny tetikasan'ny Hafatry ny Silo "Gravis ton sommet”Avy any Toulouse, ny fomba fiasa dia tafiditra ao amin'ny volana martsa, ary koa ny mpamorona 1001 mitambatra ho an'ny fanabeazana mahafaly sy ny fikambanana Femmes Internationales, mur brisé (FIMB) miaraka amin'ny tamba-jotra misy azy.
Geneva. Ny vaovao dia alefa amin'ny karazana fandrindrana. Misy fifandraisana amin'ny Jai Jagat any Soisa.
Tany Atena dia nisy fivoriana voalohany ho an'ny 2 World March miaraka amin'ireo olona 50.
Mandika ny bokikely amin'ny teny grika izy ireo.
Ireo tanànan'ny Trieste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia-Assisi, Livorno, Roma, Cagliari, Avellino, Naples, Reggio Calabria, Palermo mandray anjara.
Hanandrana handrakotra ireo tanànan'ny March 1 World sy ny hafa izahay.
Soso-kevitra izahay nizara roa eb tonga tany Italia ny Trieste 26 / 2 / 2020 (Trieste dia nokleary seranana akaikin'ny pototry ny Air Force Aviano fitaovam-piadiana nokleary 40)
Manomboka ao Trieste - Vicenza (foiben'ny tafika amerikana Ederle sy AFRICOM) - Brescia (akaikin'ny Ghedi Air Force Base miaraka amin'ny fitaovam-piadiana atrikasa 20) - Alto Verbano - Varese - Milan - Turin-Genoa (mivoaka an'i Italia 3/3/2020 mankany Ventimiglia-Nizza)
Manomboka any Trieste - Florence - Perugia - Assisi - Livorno (seranan-tsambo niokleary, akaikin'ny foibe miaramila amerikanina Camp Darby) - Roma - Cagliari (fitifirana fitifirana lehibe indrindra any Eropa) - Avellino-Naples (seranan-tsambo niokleary, Command Drafitra. avy any NATO) - Reggio Calabria - Palermo (nandao ny 3/3/2020 nankany Barcelona).
Fomba hafa mampiova hevitra
Puglia - Brindisi (seranan niokleary) hatrany Moyen Orient (Libanona) - Sipra (mety andalovana eny amin'ny tsipika maintso) - Heverina fa na manohy any Gresy sy ny Balkans izay hihaonany amin'ny ekipan'ny World Base any Rijeka (Kroasia), renivohitra Kolontsaina Eropeana 2020 na koa miara-mikambana amin'i Espana.
Miezaka mandray anjara avy any Italia izahay mba hitadiavana ny mpandray anjara amin'ny ekipa Base mba hanararaotra ny lalan-dàlana nomena azy (ary tsy izany).
Mediterane, Ranomasina Fiadanana
Ao anatin'ny tontolon'ny volana faharoa maneran-tany dia mampiroborobo ny fanentanana “Mediterane, Ranomasin'ny fandriampahalemana” isika.
Tamin'ny faran'ny Oktobra, ny sambo dia hikasika Genoa sy Nice, Barcelona, ​​Tunis, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari, Livorno sy ny zava-mitranga dia ho voalamina ao amin'ny Tranombakoka ny Ranomasina ny tanàna samihafa.
Ny fivoriana dia natao tamin'ny Sekretariat an'ny Fanjakana ao Vatican miatrika tolo-kevitra telo eo amin'ny lafiny misy antsika:
Mediterane: Ranomasina fandriampahalemana.
Ny fitsangatsanganana ho an'ny fandriam-pahalemana ny ranomasina Tandrefana mifarana ao Genoa izay handalo an'i Civitavecchia haka any Vatican (na ny toerana misy azy any Roma) ny fampirantiana "Vonizin'ny hatsaran-dranomasina", ny fampiratiana sary momba ny flora amoron'ny Ranomasina Mediterane.
Ny fampiratiana ho anao dia fotoana ahafahana miresaka mivantana momba ny tontolo iainana ao amin'ny Mediterane.
Ity dia hetsika avy amin'ny faran'ny Oktobra hatramin'ny fiandohan'ny volana novambra amin'ny 2019.
Hisy fiarahabana ho an'ny vondron'olona avy amin'ny ekipa Base izay mandeha amin'izao tontolo izao ary azo atao ny manatanteraka mariky ny olombelona ho an'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra ataon'ny tanora avy amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa.
Miaraka amin'ny fanatrehan'ny delegasiona iray, izay hanatontosana ny "Footspints Small". Daty voatondro: faran'ny Febroary / 2020.
Resadresaka nifanaovana tamin'ny ady sy ny herisetra
Ny Diabe Maneran-tany amin'ny diany dia hahita ny zava-misy samihafa ara-pinoana sy ara-pinoana, fanangonana traikefa, fijoroana vavolombelona ary olona afaka hihaona amin'ny lohataona 2020 ao amin'ny Vatican.
Mety ho fotoana ahafahantsika mahafantatra ireo tarehimarika ireo momba ny tsy fanaovana herisetra izay tsy mihaino ny hafa na tsy miraharaha ny herisetra misy azy tahaka an'i Jesosy.
Amin'ny faran'ny volana Aogositra amin'ny 2019, miaraka amin'ny vondrona hafa sy ny mpamoaka
Afaka mamorona fotoana iray izay raisin'ny Papa Masina (Pope Francis), izay hihaona amin'ny delegasiona iraisam-pirenena (voafetra) izay ahafahany mandefa hafatra amin'ny diany.
Nandefa taratasy taratasy ho an'ny Sekreteram-panjakana izahay mba hanondroana ireo karazana soso-kevitra momba ny fandrindrana
Fandraisana amin'ny Papa.
Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny herisetra sy ny fivavahana.
Madrid 6 / 3 Institutional reception.
Madrid 7 / 3 Andian-tsarimihetsika tamin'ny Martsa Faharoa.
Ary Madrid 8 / 3 dia nanatevin-daharana ny fihetsiketsehan'ny 8 / 3 International Women's Day.
Ilaina ny mampifandray indray, ny vaovao dia nalefa na nahita fifandraisana tany amin'ireto firenena manaraka ireto:
Firenena hafa any Eoropa
Ho solon'i Finlandy, Soeda, Danmarka, Polonina, Repoblika Tseky, Romania, Aotrisy, Luxembourg
Fitaovana hanamora ny karazana fandrindrana sy ny olana hafa
Efa nataonay ny tranonkala https://theworldmarch.org
Raha mikasika ny fiteny dia mangataka ny hanamarina ny haavon'ny fandikana izay atao amin'ny fiteny samihafa.
Misy ny mety hisian'ny tahirin-kevitra manan-danja amin'ny tranonkala miaraka amin'ny fandikan-teny matihanina izay tsy maintsy atao amin'ny fiteny tsirairay.
Ny lisitry ny fiteny
Afrikaans, Albaney, Amharic, Arabo, Armeniana, Azerbaijani, Basque, Belarosiana, Bengali, Bosniaka, Bolgara.
Catalan, Cebuano, Chichewa, Sinoa (Simplified), Sinoa (Traditional), Koreana, Korsika, Kroaty, Tseky, Danoa, Holandey.
English, Esperanto, Estonian, Euskera.
Filipino, Failandy, Frantsay, Frantsay, Galicien, Géorgien, Alemana, Grika, Gujarati.
Haibiby Haisianina, Hausa, Hawaiian, Hebreo, Hindi, Hmong, Hongroà.
Islandey, Igbo, Indonezianina, Irlandey, Italiana, Japoney, Javaney.
Kannada, Kazakh, Khmer, Koreana, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz.
Ary manohy izany:
Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish.
Masedoniana, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongoliana, Myanmar (Burmese).
Nepali, Norveziana, Holandey.
Pashto, Persiana, Poloney, Portigey, Punjabi, Romana, Rosiana.
Samoa, Scottish Gaelic, Serba, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovaky, Slovaky, Somali, Espaniola, Sodanezy, Swahili, Soedoà.
Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Tiorka, Okrainiana, Urdu, Uzbek, Vietnamiana, Welsh, Xhosa, Jiddy, Yoruba, Zulu.
Vita ny dingana mitam-piadiana ao amin'ny tranonkala. Rehefa tapitra ity dingana ity dia ho ampiharina amin'ny lohahevitry ny RRSS.
Ho fampiroboroboana ho an'ireo izay miara-miasa amin'ny famoahana vaovao ny lesona.
Ny tranonkala dia natao mba ahafahan'ny sehatra atao amin'ny firenena, anisan'izany ny tanàna Izany dia manamora ny karazana fandrindrana any amin'ny faritra samihafa.
Manana ekipa izahay hanohana ny fivoriana sy ny votoatin'ny tranonkala. Manasa ireo mpandray anjara liana handray anjara isika.
Tiantsika ny hientanentana sy hampivoatra azy ireo kokoa.
Manana fampahalalam-baovao 4 avy amin'ny Diabe Faharoa amin'ny Telegram isika mba hampahafantatra.
Zava-dehibe ihany ny olana ary ny tantaran'ny zava-drehetra izay nitranga hatramin'ny voalohany dia voatazona, hita ihany koa amin'ireo vaovao izay miditra amin'ny fantsona.
Izy ireo dia hanana mpitantana marobe isaky ny fiteny.
Manoro hevitra izahay ny hamorona vondrona isaky ny kaontinanta hahazoana fampahalalana haingana sy ankehitriny (ohatra: Efa niasa tany Eropa sy tamin'ny martsa amerikana atsimo izy ireo).
Ny torolàlana iray ho an'ny fampiasana ny vondrona dia ho voaomana mba hiasana sy hikatsahana azy io fa tsy miongana, mandanjalanja amin'ny fitsipika tsotra miaraka amin'ireo mpitantana 1 na 2 isaky ny firenena.
Miezaka manamafy ny mombamomba ny marainantsika manerantany amin'ny Facebook isika miaraka amin'ity fidirana tokana ho an'ny serasera ity, mba hamoronana synergy amin'ny alàlan'ny sehatra virtoaly miavaka izay manampy amin'ny fampivelarana ny karazana fandrindrana.
Izany dia mamela fa ny hetsika manokana dia azo antsoina amin'ny fiteniny sy ny fiteniny.
Hanana tranonkala Instagram izahay amin'ny teny Anglisy mba hanomezana hery ireo taranaka vaovao.
Fitaovana: Manana bokikely amin'ny teny Espaniôla ny fomba handehanana amin'ny fiteny hafa.
Ho an'ireo fahatsapan-javatra voatery hiheverantsika fa hisy dikan-teny vaovao hatao amin'ny May / 2019.
Fivoriana virtoaly manaraka hifanakalozan-kevitra momba ireo karazana fandrindrana manerantany
Mikasa ny hanao ny fihaonana maneran-tany isika amin'ny volana Jona.
Sokajy Newsletters Ticket navigation
New Jersey ho an'ny fandraràna ny fiadiana niuclear
Ny Ranomasina Mediterrian'ny Ranomasina Mediterane dia iray amin'ireo famaky ny Diaben'ny Mondialy 2ª
Novambra 2021 (1)
Oktobra 2021 (24)
Jolay 2021 (2)
Jona 2021 (1)
Janoary 2021 (2)
Oktobra 2020 (3)
Fanomezana lanja ny fomba fijery izao tontolo izao ny vazimba teratany
MSGySV Panama sy ny diaben'ny Amerikanina Latina
Forum Mankany amin'ny ho avy tsy misy herisetra
Mahatadidy ireo hetsika teo aloha tany Arzantina